China SPC Floor SM-053 Ukwakha kanye nefektri | I-Aolong
Iphansi le-SPC wuhlobo olusha lwesitezi, olwaziwa nangokuthi phansi kwepulasitiki yamatshe. Impahla yayo eyisisekelo ibhodi elihlanganisiwe elenziwe ngempuphu yamatshe nangempahla ye-thermoplastic polymer ngemuva kokuxubana ngokulinganayo bese kukhishwa ekushiseni okuphezulu. Ngasikhathi sinye, inezici nezici zokhuni noplastiki ukuqinisekisa ukuqina nokuqina kwaphansi. Iphansi le-SPC lisuselwa kwisifinyezo sezinhlanganisela zamatshe zepulasitiki, ezibizwa nangokuthi phansi kwepulasitiki yamatshe.
Yini impahla iphansi le-SPC
SPC phansi ikakhulukazi ezenziwe calcium powder njengoba impahla eluhlaza futhi ishidi extruded ngu plasticization. Iqukethe ungqimba lwe-SPC polymer substrate, ungqimba we-PUR Crystal Shield obonakalayo, ungqimba olungagqoki, umbala wokuhlobisa ifilimu nongqimba oluthambile noluthule.
Isingeniso kumazinga kazwelonke we-SPC flooring okwamanje, indinganiso kazwelonke ye-PVC eqinile ye-PVCT yenziwa nge-SPC flooring e-China 34440-2017, indinganiso icacisa imigomo nezincazelo, ukuhlukaniswa, ukuhlonza umkhiqizo, izidingo, izindlela zokuhlola nokuhlola imithetho, kanye nokumaka, ukupakisha, ukuhambisa kanye nokugcinwa kwaphansi okuqinile kwe-PVC. Leli zinga lisebenza kuphansi ne-PVC resin plate njengempahla eyinhloko eluhlaza futhi esetshenziselwa ukubeka endlini ngokugaya indawo.
Izinzuzo: 1, ukuvikelwa kwemvelo kanye ne-formaldehyde mahhala, i-SPC phansi enqubeni yokukhiqiza ngaphandle kweglue, ngakho ayiqukethe i-formaldehyde, i-benzene nezinye izinto eziyingozi, i-real 0 formaldehyde floor green, ngeke idale umonakalo emzimbeni womuntu. 2. Ubufakazi obungenamanzi nobumswakama, iphansi le-SPC linezinzuzo zokungenwa ngamanzi, ukufakazela umswakama nesikhunta, okuxazulula ukushiyeka kwephansi lendabuko elenza amanzi nomswakama, ngakho-ke iphansi le-SPC lingagandaywa endlini yangasese, ikhishi nebhalkhoni. 3. Isisindo kulula ukusihambisa, iphansi le-SPC lilula kakhulu, ubukhulu buphakathi kuka-1.6mm-9mm, isisindo ngesikwele ngasinye siyi-2-7.5kg kuphela, eyi-10% yesisindo sephansi elijwayelekile lokhuni.
Langaphambilini SPC Phansi SM-052
Olandelayo: Isitezi se-SPC 501